UFitbit Umemezela Amasongo Wawo Omusha Wokulinganisa: Charge 2 neFlex 2 | Ngivela kwa-mac
I-Fitbit imemezela amabhande ayo amasha wokulinganisa: I-Charge 2 ne-Flex 2
Njengoba kuputshuke phambilini, uFitbit umemezele ukuvela kwamasongo akhe amabili aphumelele kakhulu wokulinganisa. Sibhekisa kumamodeli weCharge 2 neFlex 2.
Ngokuhambisana nalokhu, inkampani isimemezele nokuvuselelwa kwesoftware okuzayo kokugqokwa kwayo kweBlaze ne-Alta okuzoletha ukusebenza nezici ezintsha.
1 Isizukulwane sesibili iFitbit manje sesisemthethweni
1.1 I-Fitbit Charge 2
1.2 I-Fitbit Flex 2
2 Amanani nokutholakala
Isizukulwane sesibili iFitbit manje sesisemthethweni
Emasontweni ambalwa edlule, iwebhusayithi yeTechnoBuffalo iveze izithombe zalokho okungaba amasongo amasha weFitbit. Impumelelo ibe ngokuphelele. Ngemuva kokuhlungwa okushiwo, UFitbit umemezele ngokusemthethweni iFitbit Charge 2 neFitbit Flex 2 entsha. Futhi njengoba sesithuthukile, futhi nesibuyekezo sesoftware yamamodeli weBlaze ne-Alta azoletha izaziso ezintsha, ubuso bewashi nezikhumbuzi.
I-Fitbit Charge 2
Siqala nge-Fitbit Charge 2. Le divayisi entsha iza nokuhle Isibonisi se-OLED izwela ngokuthintwa futhi inhloso kabani ukuqoqa umsebenzi wosuku lonke. Lokhu kufaka izibalo ezivame kakhulu njengenombolo yezinyathelo ezithathiwe, ukushaya kwenhliziyo, ukuhamba ibanga, ama-calories ashisiwe, nokunye okuningi.
Njengamanye amamodeli agqokekayo weFitbit, iCharge 2 ikuvumela ukuthi wenze ifayili le- landelela imijikelezo yokulala bese usetha ama-alamu uvukile. Nathi singakwazi setha imigomo yomsebenzi ukuthi zisikhuthaza ukuthi senze umzamo nsuku zonke ngokwengeziwe.
Ngaphezu kwalokho, i-Fitbit Charge 2 ingenziwa ngezifiso ngokuya ngomcimbi nge uchungechunge olusha lwezintambo zokunethezeka ngesikhumba nezinye izesekeli ezisezingeni eliphakeme.
Ukuthuthuka okukhulu ngaphezu kweFitbit Original yilokho isikrini esisha se-OLED esikhudlwana izikhathi ezine "Ngakho-ke ungabona izibalo zomsebenzi omningi futhi ugcine imigomo yakho yokuqina ngokomkhondo ngokubheka nje."
Ngaphezu kokufundwa komsebenzi osisekelo womzimba, isikrini sizophinde sikhombise imininingwane evela ku-smartphone esixhunywe kuyo njengemiyalezo ebhaliwe nama-imeyili.
Ngokuya ngokuthi isetshenziswa kanjani, i-Charge 2 entsha ifaka i- Ukuzimela kuze kube yizinsuku ezi-5.
Ifana kakhulu nohlelo lokusebenza lwe- "Breathe" oluzofika ku-Apple Watch nge i-watchOS 3, isici se- "Relax" esimenyezelwe yiFitbit. Lesi sici, siyatholakala ku-Charge 2, izohola abasebenzisi ngokusebenzisa izivivinyo zokuphefumulansuku zonke ukukusiza uphumule. Ukuphumula kuzofunda izinga lokushaya kwenhliziyo lomsebenzisi ngamunye ukuthola isilinganiso sokuphefumula esihle kakhulu sokuzivocavoca ngalunye, ngamaseshini enziwa ngezifiso wemizuzu emi-2 kuya kwemihlanu.
I-Fitbit Flex 2
Siyaqhubeka ngeFitbit Flex 2, eyi Ama-30% amancane ukwedlula imodeli yasekuqaleni. Iqhubeka nokwakhiwa okuncane kwesizukulwane sokuqala futhi igcina ilambu lamalambu e-LED esikhundleni sesikrini sendabuko. Ngenxa yalokho, i-Flex 2 inamandla, kuze kufike kumamitha angama-50 ngaphansi kwamanzi. Ngakho-ke, iyakwazi "Landelela ngokuzenzakalela izivivinyo zakho zokubhukuda njenge-Workout kuhlelo lokusebenza lweFitbit, thatha amathanga akho, isikhathi sakho sokujima, nokusha kwekhalori."
Ngenxa yokwakheka kwayo, ingafakwa ezinhlobonhlobo zezesekeli ezintsha ezenziwe yinkampani. Lokhu kufaka phakathi amasongo emfashini ayisisekelo, amabhande, ngisho nemigexo. AbakwaFitbit bazokwethula futhi "amaqoqo abakhiqizi" bezinsimbi ezintsha ezigqokekayo, kufaka phakathi amabhande wensimbi engagqwali namasongo enayiloni nawo azobiza ngentengo yokunethezeka engaphezu kuka- $ 300.
La I-Fitbit Flex 2 itholakala ngoku-oda ngaphambilini ngombala omnyama, i-lavender, i-magenta ne-navy ye 99,95 € futhi izokhishwa ngokusemthethweni ngoNovemba.
La Inkokhelo ye-Fitbit 2 It has presents more color options: Black / Silver, Plum / Silver, Blue / Silver, Turquoise / Silver, Lavender / Rose Gold, kanye neBlack / Gunmetal. Lezi ezimbili zokugcina zibhekwa "njengezinhlelo ezikhethekile". I-Charge 2, njengoba sibona esithombeni esilandelayo, nayo iyathengiswa ngaphambili, kanti ukuthunyelwa okulinganiselwa ku-The Yellow Rush kuyizinga elithengwa cishe yiwo wonke umuntu. Yiyo ephuma emasontweni ayi-123, yize eminye imithombo yezindaba ikhombisa ukuthi akunjalo. Intengo yayo ngu kusuka ku- € 159,95
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Fitbit imemezela amabhande ayo amasha wokulinganisa: I-Charge 2 ne-Flex 2
Izindlela ezingcono kakhulu kwikhibhodi yomlingo ka-Apple